Algeria Oo Shuruud Ku Xidhay Inay Dib Ula Heshiiso Faransiiska – somalilandtoday.com
Algeria Oo Shuruud Ku Xidhay Inay Dib Ula Heshiiso Faransiiska
(SLT- Algeria)-Madaxweynaha Algeria Abdelmadjid Tebboune ayaa Axaddii “ixtiraam buuxa” ka dalbaday Faransiiska kadib murankii dhex-maray labada dal ee ku saabsan dal-ku-galka iyo haddallo aan wanaagsaneyn oo Paris ay ka sheegtay dalka ku yaalla Waqooyiga Afrika.
Toddobaadkii tegay, Algeria ayaa u yeeratay safiirkeeda Paris, waxayna hawadeeda ka mamnuucday diyaaradaha millatari ee Faransiiska, oo ay si joogto ah ugu adeegsadaan howlgallada lagula dagaalamayo jihaadiyiinta gobolka Sahel.
Dib usoo laabashada safiirka Algeria ee Faraniiska “waxaa ku xidhan shuruud ah in dalka Algeria uu helo ixtiraam buuxa”, ayuu Tebboune u sheegay warbaahinta gudaha.
“Waan hilmaamnay in Algeria ay mar aheyd maxmiyad Faransiis ah…taariikhda ma ahan in laga been sheego,” ayuu yidhi.
“Iskama dhigi karno inaysan waxba dhicin,” ayuu Tabboune ka yidhi taariikda Algeria iyo gumeystihii hore ee Faransiiska.